Inona no atao hoe famolavolana? Izy io dia zavatra afaka manampy antsika amin'ny fiainantsika. Famoronana an-tserasera
Paul gondar | | maro
1 Inona no atao hoe famolavolana? Izy io dia zavatra afaka manampy antsika amin'ny fiainantsika.
2 Ny endrika dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny tanjona sasany
2.1 Tsy maintsy mazava ny hafatra
3 Milalaova amin'ny teny
Inona no atao hoe famolavolana? Izy io dia zavatra afaka manampy antsika amin'ny fiainantsika.
Fanontaniana iray izay mety hiteraka adihevitra sy fomba fijery maro nanomboka tamin'izay maro ny olona mahita ny famolavolana toy ny ataon'ny zana-drahalahiko amin'ny PC ao anaty tolakandro na ilay afisy amin'ny fetin'ny tanàna, ny marina dia ny famolavolana a fahaizana manokana hita amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika. Fantatrao ve fa ny fizarana tanàna noforonina tamin'ny famolavolana? fandaminana, tanjona ary famahana olana no lafiny sasany amin'ity famaizana ity.
Mitady ny endrika mamaha olana amin'ny fametrahana vahaolana Mikaroha ny fahombiazana lehibe indrindra azo avy amin'ny fomba fijery azo ampiharina (amin'ny ankamaroan'ny tranga) izay atambatra ny famoronana miaraka amin'ireo lafin-javatra teôria, fitantanana hamoronana vokatra tena manintona matetika. Jereo hoe amin'ny fomba ahoana no anampian'ny famolavolana antsika hamaha olana maro isan'andro amin'ny vahaolana mamorona be.
Ny endriny lavitry ny eritreritry ny maro tsy vahaolana sary io izay ny artista / mpamorona dia maneho hevitra amin'ny afisy, karatra sy karazana haino aman-jery rehetra fa dia specialty izay mihoatra ny azontsika eritreretina. Azontsika lazaina izany mipoitra toy ny filan'ny olombelona ny endrika, ny filàna mamaha olana amin'ny lôjika, satria ny famolavolana dia izany indrindra, ny fikaroham-bahaolana amin'ny karazana olana rehetra. Azontsika lazaina izany Rehefa mieritreritra ny fomba fanafaranay ny fizarana ny tranonay izahay dia manao famolavolana satria manitsy ny habaka ananantsika isika amin'ny fomba ahatratrarana vokatra azo ampiharina, ohatra ny fampiasana toerana.
Un tranga azo ampiharina mba hahalalana bebe kokoa ny atao hoe famolavolana dia ny mahita azy amin'ny ohatra izay manampy antsika haka sary an-tsaina azy tsara kokoa (ny fampiakarana an'ity drafitra ity dia efa endrika). Andao alao sary an-tsaina izany te hipetraka ao an-tranonay izahay fa tsy manam-bola noho izany, noho izany antony izany mieritreritra vahaolana amin'ny olanay izahay, amin'ity tranga ity dia ny tolo-kevitra tsotra indrindra dia mahazo seza mifanaraka amin'izay ilaintsika amin'ny tranga misy anay. Amin'ity tranga ity dia mila seza plastika isika satria any ivelany dia hahatanty tsara ny toetrandro, mila mahatohitra ihany koa izy mba hahafahany mifanaraka amin'ny karazan'olona rehetra ary tsy maintsy ho kanto amin'ny fahitana izy mba hahafinaritra ny maso. Raha te hanana seza mifanentana amin'izany rehetra izany isika dia tsy maintsy nanao lisitry ny fepetra takiana amin'ny sezanay mba hanatanterahana ny tena tanjony, amin'ity tranga ity dia ho seza ivelany ho an'ny olona.
Ny endrika dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny tanjona sasany
Ny endriny rehetra dia tsy maintsy mahazoa tanjona maromaro ary mitadiava valiny izay mety indrindra amin'ny namboarina satria Zava-poana ny famolavolana seza raha tsy hipetraka eo amboniny ianao, raha tsy ny hipetraka eo amboniny no tanjon'ny seza fa ny fandinihana azy, raha toa izany, dia hahatratra ny tanjony satria ny tanjon'io seza io dia tsy ny hipetrahana fa ny haingon-trano. Izy io dia lalaovina eo anelanelan'ny sary sy ny ilaina mitady fomba tsara indrindra hahatongavana any amin'ny faran'ny zavatra.
Rehefa mandeha eny amin'ny arabe isika dia mahita ny karazana isan-karazany fanaka an-tanàn-dehibe natao ho an'ny tanjona samihafa, ireo fanaka rehetra ireo dia tsy maintsy manintona sy mahasoa ho an'ny mpampiasa manatsara ny fiainan'ny tsirairay, na dia fotoana fohy aza a famolavolana manerantany namboarina tamin'ny karazan'olona rehetra. Ny arabe, ny rafitry ny fitateram-bahoaka, ny fizarana singa sy zavatra maro hafa izay hitantsika amin'ny fiainantsika isan'andro eny an-dalambe dia noforonina tamin'ny fampiasana ny endrika ho fitaovana. Raha te hahita isika ohatra tsara amin'ny famolavolana tanàna fa mila mitsidika ny tanànan'i Barcelona fotsiny isika, ny arabe sy ny fizarana azy dia endrika mahomby.
Ny volavola avy amin'ny fomba fijerin'ny dokam-barotra / sary dia mitovy amin'ny hitantsika tamin'ny ohatra ny seza, mametraka olana ny dokam-barotra ary mamaha azy amin'ny fomba iray na hafa amin'ny alàlan'ny fampiasana sary dokam-barotra.
Tsy maintsy mazava ny hafatra
Ny endrika tsara dia mampita, mamindra ary mahafeno tanjona tsara, noho izany antony izany ny dokam-barotra dia ohatra tsara hilazana ny fampiasana ny endrika ho fitaovana hahatratra ny faran'ny sasany no hamaritanay. Mitady foana ny dokam-barotra mampita hevitra izay efa nofaritana tamin'ny alàlan'ny afisy sy karazan-dahatsoratry ny dokambarotra rehetra.
Amin'ny sehatra sosialy ny famolavolana doka ara-tsosialy dia mety ho mpiara-miasa akaiky satria raha te hamorona isika "Seza tsara" amin'ny teny hafa dia hafatra tsara, tsy maintsy ataontsika manana hevitra mazava mialoha hanatratrarana ny tanjontsika. Androany dia misy fampielezana doka lehibe izay ahitantsika ny karazana soatoavina rehetra nampitaina tamin'ny sary. Tsy mandeha ny doka satria mamorona saingy satria efa voafaritra teo aloha ny tanjona, tsy misy ilana azy ny manao doka makamba raha mivarotra seza ny orinasanay ...
Lavitra ny fanontaniana momba ny etika amin'ny doka, fanjifana ary kapitalisma, hitantsika ao fanaovana dokambarotra fitaovana fifandraisana matanjaka be hamaha ny olana isan-karazany.
Tsy misy fisalasalana mifandray amin'ny famolavolana ny fifandraisana satria ny tanjon'ny doka dia ny hampita mazava tsara. Ao amin'ny ohatra sary dia afaka mahita voalohany isika fampiasana diso ny famolavolana Eny, tsy mazava ny hafatra, etsy ankilany, amin'ny sary faharoa dia hitantsika mazava tsara ilay hevitra tianao hampitaina. Azo antoka fa fanontaniana tokony hapetratsika amin'ny tenantsika alohan'ny hanaovana karazana dokambarotra izany.
Ny sary voalohany dia tsy manazava ny hafatra tian'ilay olona hampitaina, fa tsy ny sary faharoa dia ohatra amin'ny famolavolana tsara Mampita mazava ny tanjona (hivarotra labiera).
Milalaova amin'ny teny
Raha jerentsika akaiky daholo famolavolana doka (endrika tsara) dia maneho mazava tsara izay tianao hampitaina milalao amin'ny karazana loharanom-pahalalana sary rehetra. Afaka milalao amin'ny teny ny doka, miaraka amin'ny dikany, miaraka amin'ny fihetsem-po, azonao atao ny milalao ny zava-drehetra amin'ny fomba faran'izay madinidinika fa noho ny famolavolana teo aloha izay mamorona taolana tsy hita maso ho an'ny mpampiasa.
Ny endrika dia hisy foana amin'ny fomba iray na amin'ny lafiny hafa amin'ny fiainantsika satria medium izany fa tsy asa tsotra misy ny andraikitry ny mpamorona milalaova amin'ny lojika sy ny famoronana maro Buscando mamaha olana hafa. Betsaka ireo matihanina eo amin'ny tontolon'ny famolavolana izay niresaka momba ny famolavolana sy ny tanjony, raha toa ianao ka te hahalala bebe kokoa momba an'io dia afaka mijery ity horonantsary manaraka ity ianao.
Raha toa ianao liana amin'ny famolavolana doka ary te hahita andinin-tsoratra hafa maro ianao ho an'ireo tetik'asa sary ho avy mety ho hitanao ireto fanovozan-kevitra manaraka ireto:
Ohatra 60 amin'ny doka famoronana ao amin'ny Pinterest.
Doka sy fifandraisana amin'ny Pinterest.
Doka ara-tsosialy mamorona
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Inona no atao hoe famolavolana? Izy io dia zavatra afaka manampy antsika amin'ny fiainantsika